Masha poloney • fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Nametraka fotoana indray ianao ary ny zazavavy avy amin'ny sary dia tsy mitovy amin'ny tena… ..
Mandeha amin'ny fiara ianao ary diso fanantenana tanteraka….
Ny daty farany ametrahanao TIMER ary tsy miraharaha afa-tsy ny VOLA…
Isaky ny manandrana manao SCREENING ianao (selfie mahazatra, selfie amin'ny rantsan-tsary, sary tena izy, sary misy naoty) satria tsy te hiditra amin'ireo toe-javatra 3 teo aloha ianao?
Avelao aho hiditra eto. Vaovao aho ao amin'ity orinasa ity, saingy fantatro fa tokony ho marina ny daty tokony hisy .. ..
Izaho dia Masha, mpianatry ny oniversite any Santa Monica. Mbola tanora sy tsara tarehy aho izao, izao dia manao izay tiako atao, sady mampiasa vola amin'ny ho aviko miaraka amin'ny fanabeazana. Tsy hahatonga anao hiandry mandrakizay mihitsy aho ary hametraka ambony eo ambony hoe maninona? Satria manaja ny fotoananao sy ny kalitaon'ny fotoana iarahanay aho.
Ny sariko dia vao haingana ary napetako eto ny Instagram mba hahafahanao manao fampitoviana amin'ny sariko doka sy kaonty sosialy. Tiako ny mandefa selfie anao aorian'ny anao.
Andao hiara-mifaly amin'ireo fotoana mahafinaritra sy tsy hay hadinoina. Te hanana fisainana malalaka aho matoky anao hanandrana tsiro mahafinaritra amin'ny fahafinaretana. Ny hany karakaraiko dia ny onja sy ny fitiavana eto amintsika…
Alefaso mailaka aho handraisana fotoana amin'ny fotoana tena mahavariana indrindra amin'ny fiainanao sy ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Fiainana fohy vorona Manidina ߒ հ ߒ